Fumana indawo yokutyela enamaphepha aMthubi | Ukuhamba kwe-Absolut
Iphepha eliMthubi liyaqhubeka ukuba sisalathiso sikarhulumente sokukhangela iindwendwe kunye neengcali zalo naluphi na uhlobo, ukusuka koogqirha bamazinyo ukuya kubatywini, kwiindawo ezinkulu usingasiqithi. Kwaye yimfuneko yokufumana indawo yokutyela elingana nesihlandlo ngasinye ekunyanzela ukuba uye kwiPhepha eliMthubi, kuba iqokelela ezona ndawo zokutyela zibalaseleyo eSpain kwaye inika ithuba lokubhukisha eqongeni ngokwalo.
Kuxhomekeka umsitho, unokukhangela yokutyela kunye menu mihla le okanye indawo yokusebenzela eneleta evulekileyo, yonke into iyahluka ngokwenkampani nangomhla weveki. Nazi ezinye iingcebiso malunga nendlela yokukhangela kunye nokuba yeyiphi iivenkile zokutyela oza kubhukisha kuzo zonke izihlandlo.
1 Ivenkile yokutyela ukuvala isidlo sasemini seshishini
2 Ivenkile yokutya kunye nosapho okanye nabahlobo
Ivenkile yokutyela ukuvala isidlo sasemini seshishini
Ukutya kweshishini kunokuba yinto ehluke kakhulu, ekubeni nenxalenye yentengiselwano apho iqela labantu lifuna ukuvala isivumelwano, kwintlanganiso phakathi koogxa abasebenza kwinkampani enye. Injongo yale ntlanganiso kukusoloko ukwenza umoya opholileyo kunye noxolo phakathi kweediners, ukuze imbeko efunekayo yenziwe ukuba ithethe ngokuthe ngqo nangokucacileyo.
Ngale ndlela, zimbini iindlela ezahlukeneyo zokuya kwingqesho. Ukuba yintlanganiso yentengiselwano, kungcono ukuya kwindawo yokutyela ileta evulekileyo apho omnye umntu anikwe ithuba lokukhetha eyakhe ipleyiti. Ngale ndlela, awuyi kuziva unyanzelekile ukuba wenze izigqibo ngokungxama, into eza kusebenza kwibala lezoshishino ukuba unikwe inkululeko efanayo. Kwelinye icala, ukuba sisidlo phakathi kweqela lomsebenzi okanye phakathi koogxa esele basebenze kunye, indawo yokutyela enemenyu yemihla ngemihla lukhetho olufanelekileyo. Ngemenyu evulekileyo, onke amaqela angoneliseka naziphi na iindlela ezikhoyo, kunye nokulungisa ixabiso kuzo zonke iintlobo zeepokotho.
Kulo Isikhokelo samaphepha aMthubi unokufumana iindawo zokutyela zazo zonke iintlobo, zombini kunye nemenyu yosuku kwaye ngaphandle kwayo, kunye nokusemandleni yokutyela incwadi njengenketho ngaphakathi kweqonga. Inkqubo ngokwayo iyanceda ukwahlula phakathi kwamaziko apho kuya kufuneka kugcinwe ngenxa yomthamo.
Ivenkile yokutya kunye nosapho okanye nabahlobo
Ukuba itheko lesidlo kude nekhaya liqukethe umbhiyozo wosapho okanye kwintlanganiso phakathi kwabahlobo, kunokwenzeka ukuba ukutyunjwa kwenzeke ngeveki. Kule meko, kukho zokutyela ezitshintsha imenyu Kumsitho wangooLwezihlanu, ngeMigqibelo nangeeholide, kunye nabanye abanokungabinakho ukukhetha kwimenyu yosuku. Kwincwadi eneenkcukacha yaMaphepha aMthubi olu lwazi lubonakala lukwazi ukubona phakathi kwawo onke amathuba.
Ngayiphi na imeko, xa kufikwa kumbhiyozo wosapho, eyona nto ifanelekileyo kukuya kwindawo efanelekileyo yokutyela enemenyu, apho unokukhetha khona. Nangona oku kuxhomekeke kwinani leediners.
Nokuba ungaphi na, inkampani kunye nosuku ekufuneka uye ngalo kwivenkile yokutyela, kwi-Yellow Pages online isikhombisi kunokwenzeka ukuba ufumane indawo yokutyela wenze zonke iintlobo zokutya.
Iindawo zokutyela nemivalo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Fumana indawo yokutyela enamaphepha aMthubi